ဂျပန်နိုင်ငံသားများနည်းတူ လစာနှင့်အခွင့်အရေးများ ရရှိမည့် မြန်မာအထူး ကျွမ်းကျင်လုပ်သားမ?? - Yangon Media Group
ဂျပန်နိုင်ငံသားများနည်းတူ လစာနှင့်အခွင့်အရေးများရရှိမည့် မြန်မာ အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ စေ လွှတ်ရေးအတွက် လာမည့်မတ်လကုန်တွင် ဂျပန်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ အစိုးရတို့ MoC ထပ်မံရေးထိုး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယခုထပ်မံရေးထိုးမည့် MoC (နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာစာချွန်လွှာ) ပြီးပါက ဂျပန်အလုပ်အကိုင် ၁၄ မျိုးအတွက်ကို မြန်မာအထူးကျွမ်းကျင် လုပ်သားအဖြစ် စေလွှတ်ခွင့်ရရှိ တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထပ်မံရေး ထိုးနိုင်ရေးအတွက်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်က အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ် ကြီး H.E. Mr. Ichiro MAR- UYAMA နှင့်အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ယင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်က သိရသည်။
”အခု MoC လက်မှတ်ရေး ထိုးပြီးရင် အလုပ်အကိုင် ၁၄ မျိုးအတွက်ကို အလုပ်အကိုင်စေလွှတ်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအနေနဲ့ သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ခလစာနဲ့ အခွင့်အရေးတွေကအစ ဂျပန်နိုင်ငံသားလုပ်သားတွေနဲ့တန်းတူ လုပ်ခရော၊ အခွင့်အရေးရော ရမှာဖြစ်တယ်။ စာမေးပွဲကိုတော့ သူတို့ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင် ဂျပန်စာအရည်အချင်းရော၊ လုပ်ငန်း Skill Test ရော လာစစ်မယ်။ ပြီးတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ ဘက်ကပွဲစားတွေနဲ့ လုပ်ကိုင်ခွင့် မပြုတော့ဘူး။ ကျန်တဲ့သူတို့ ဘယ်လိုသင်တန်းတွေလာပေးပြီး စာ မေးပွဲတွေ ဘယ်လိုစစ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရယ်။ Demend Letter (အလုပ်ခေါ်စာ)တွေ တို့ မြန်မာဘက်ကအေဂျင်စီတွေနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်မယ် ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေ ထပ်ပြီးညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးရဦးမယ်။ သူတို့ဘက်ကတော့ အမြန်ဆုံးစတင်စေချင်တာပေါ့။ တို့ဘက်ကတော့ ညှိရမယ့် အပိုင်းတွေရှိသေးလို့ သူတို့ဘက် ကို MoC မူကြမ်းတောင်းထားတယ်”ဟု အလုပ်သမားညွှန်ကြား ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်က ပြောသည်။
ဂျပန်သို့ မြန်မာအထူးကျွမ်း ကျင်လုပ်သားစေလွှတ်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာ (MoC) ကို နှစ်နိုင်ငံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်း ကို ဦးစွာဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ရာ ယင်းနောက် နှစ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးအဆင့် (MoC) ရေးထိုး ခြင်းအဆင့်ထိပါ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုခေါ်ယူမည့်အထူးကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားများသည် ယခင်နည်းပညာသင်တန်းသားအ လုပ်သမားများကဲ့သို့ ဂျပနိုင်ငံ တွင် ပညာသင်ပြီး အလုပ်လုပ် ရန်မဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ တွင် နည်းပညာဆန်းစစ်ခြင်းစာ မေးပွဲနှင့် ဂျပန်ဘာသာစကားပြော စာမေးပွဲများပြုလုပ်ပြီး ဖြေဆို အောင်မြင်သူများအား အလုပ်ခန့်မည့်ကုမ္ပဏီများက တိုက်ရိုက် လာရောက်ရွေးချယ်သည့် စနစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အထူးသဖြင့် ဟိုတယ်လုပ် ငန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှလုပ်သားများအား ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်ငန်း ရှင်များမှ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပြီး မြန်မာပြည်တွင်လာရောက်ကာသုံးလသင်တန်းကြိုတင်ပေး၍ အလုပ်သမားခေါ်ယူရေးဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနက သိရသည်။ ယခင်က ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မြန် မာလုပ်သားစေလွှတ်မှုကို သင်တန်းသားလုပ်သားခေါင်းစဉ်ဖြင့်နားလည်မှုသဘောသာ စေလွှတ်ခဲ့ရာမှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် နှစ်နိုင်ငံအလုပ်သင်လုပ်သားစေလွှတ်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoC) ကိုရေးထိုးခဲ့ကာ လက်ရှိတွင် ဂျပန်သို့မြန်မာလုပ်သားများကို အလုပ်သင်လုပ်သားအ ဖြစ် စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်ရုံလုပ်ငန်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစတဲ့ အလုပ်အကိုင် ၄၊၅ မျိုးခန့်ကိုသာ စေလွှတ်ခွင့်ရနေခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ယခုထပ်မံကာ အ ထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ် စေ လွှတ်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး ပါက ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများအပါ အဝင် အလုပ်အကိုင် ၁၄ မျိုးအထိ တိုးမြှင့်စေလွှတ်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်သလို လက်ရှိတွင် ဂျပန်သို့ မြန်မာလုပ်သားဦးရေ ၁၂ဝဝဝ ကျော် စေလွှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။